Ndụmọdụ maka njem na Black Forest | Akụkọ njem
Akwụkwọ ụlọ nkwari akụ
Carsgbọ ala mgbazinye akwụkwọ
Akwụkwọ ụgbọ elu
Onyinye na ahia
Iso umuaka eme njem
Ihe ị ga-ahụ
Ndụmọdụ maka njem na oke ọhịa ojii
Mariela Carril | | Alemania, Atụmatụ
Otu n'ime mpaghara kacha mma na Germany bụ Nwa ohia. Kedu onye na-enweghị ike ịhụ oke ọhịa ya, obodo nta ya na akụkọ ifo, isi iyi ya na-ekpo ọkụ, okporo ụzọ ya na gastronomy…?
Mpaghara a dị na Baden-Württemberg, ndịda ọdịda anyanwụ Germany ma taa anyị ga-akwụsị na ụfọdụ ezigbo mma Atụmatụ maka ịga na Black Forest. Chọsie ike!
1 Nwa ohia
2 Ndụmọdụ maka njem na oke ọhịa ojii
Na ụkpụrụ nke Black Forest Ọ bụ oke ọhịa nke oke ugwu oge ahụ aghọwo otu n'ime Ebe njem nlegharị anya kacha dị oke ọnụ ahịa nke Germany.
Ọtụtụ n'ime osisi ndị ahụ bụ firs na-amanye n'ime ibe ha wee tolite ghọọ oke ọhịa. Ọtụtụ ndị na-ekwu na ọ bụ n’ebe a ka aha ógbè ahụ si bịa, ọ bụ ezie na echiche ọzọ na-egosi na ọ bụ ndị Rom bụ ndị mgbe ha rutere chọpụtara na okporo ụzọ dị n’agbata ugwu ndị ahụ dị.
Oke ọhịa na-amalite ebe Germany, France na Switzerland na-ezukọ wee gbagoro ihe dị ka kilomita 160 n'ebe ugwu Germany, na-akpụzi otu osisi nke dị n'agbata kilomita 30 na 60 n'ogologo. E nwere osimiri atọ, ọtụtụ ọdọ mmiri mara mma, mmiri ọkụ na ihu igwe, doro anya, bụ ugwu ugwu, na okpomọkụ dị jụụ na oyi oyi.
The Black Forest emepụtala àgwà omenala nke ya ka oge na-aga, na ejiji mpaghara, ememe, nnọkọ na gastronomy. Ma taa, n'ihe gbasara njem nlegharị anya, ihe ọ na-enye bụ ihe niile dị n'akụkụ ọdọ mmiri: paragliding, hiking, balloon , njem nlegharị anya kayak, ski, ịnya ịnyịnya ...
Mbụ ị ga-erute ebe a. Ọ bụrụ n'ịbanye na Germany n'ụgbọelu, ị nwere ike ịbanye nke ọma site na obodo Frankfurt ma si ebe a buru ụgbọ oloko gaa Freiburg nke n'aka nke ya jikọtara ya na Baden-Baden, Karlsruhe, Offenburg na nnukwu obodo ndị ọzọ na mba ahụ.
Ọ dị mma ugbu a Ọ bụrụ na ị nọla na Europe wee si mba EU bịa, ị nwere ike fega ozugbo na ọdụ ụgbọ elu Base-Mulhouse, ziri ezi na ókè-ala France na Switzerland na ọtụtụ nso na Freiburg im Bresgau. Enwere ọrụ ụgbọ ala ugboro ugboro n'etiti ọdụ ụgbọ elu Basel na Freiburg.
Ị ga-eburu n'uche na Ọ bụrụ na ebumnuche gị bụ iji ụgbọ njem ọha gaa na Black Forest nke ga-achọ atụmatụ. Ọ bụrụ na ị na-aga ofufe na nnukwu obodo mgbe ahụ ị ga-achọ iji mpaghara ụgbọ okporo ígwè gafere iji nweta obodo nta ndị na-apụta na njem njem.
Ọ bụrụ na ịchọrọ iji ụgbọ oloko nwere echiche mara mma, mgbe ahụ nhọrọ kacha mma bụ itinye ego na ya Kaadị Konus, Kaadị ndị ọbịa nke nwere oge nkwado akọwapụtara ma na-enye gị ohere iji ụgbọ oloko na ụgbọ ala mpaghara. Na kwa tram na ụgbọ ala nke Freiburg na Karlsruhe.
Ọ bụrụ na ị nwere ego na-amasị gị ịnya ụgbọ ala mgbe niile ọ ga-ekwe omume ịgbazite ụgbọ ala na inyocha Black Forest na nnwere onwe zuru oke. Enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ mgbazinye, yabụ ị nwere ike ịgbazite ya wee chere gị n'ọdụ ụgbọ elu.
Site na Frankfurt ị ga-ewere Autobahn A5 nke na-agafe Offenburg n'akụkụ ọdịda anyanwụ nke Black Forest. Ị nwekwara ike iburu A81 nke na-agafe na ndagwurugwu nke dị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke mpaghara ahụ. Ụzọ abụọ a nwere ike bụrụ ebe mmalite dị mma maka ịnya ụgbọ ala gburugburu mpaghara.
Kedu mgbe ị ga-aga na Black Forest? Schwarzwald bụ ebe na-aga n'afọ niile, yabụ ọ ga-adabere n'ihe masịrị gị, Ịnya igwe, ski, cross-country ski, ịrị elu? Ọ bụrụ na-amasị gị Trekking mgbe ahụ, ị ​​ga-aga n'oge okpomọkụ. Mmiri na-abịa mbubreyo ebe a, n'ihi na elu, ya mere na mmalite nke March n'elu ugwu ka nwere ụfọdụ snow. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ osisi ahụ na ịma mma ya, mgbe ahụ ị ga-aga na njedebe nke April, mmalite nke May.
Maka ịgba ígwè ma ọ bụ njem Nordic, mgbe ahụ ihe kacha mma bụ ụbịa. Agba ocher nke ọdịda bụ ihe pụrụ iche, nke ka njọ ka enwere ụfọdụ perennials yabụ foto ga-adị mma. Na mgbakwunye, kwa maka ụbọchị ndị a enwere mmemme omenala na mmemme ọdịnala dị iche iche. Na n'oge oyi? Ee, enwere otutu, otutu snow. Enwere asọmpi ịwụ ski, ịnya nkịta. bọọdụ snow na ihe niile. Ma n'ezie, ugbu a na December ahịa Krismas bụ usoro nke ụbọchị na-agbakwụnye amara.
Ndị ọkachamara na ọhịa ojii kwuru nke ahụ ụzọ kacha mma iji chọpụta ya bụ isi n'otu ebe wee si ebe ahụ hazie njem na njem mmụta. Ị nwekwara ike ịhọrọ ụfọdụ ụlọ ime obodo, ebe a na-ewu ewu nke ukwuu. Ị nwere ike ịhọrọ ịnọ na Freiburg ma ọ bụ ebe dị nso nke dị ọnụ ala karịa. Dịka ọmụmaatụ, Kirchzarten. Nhọrọ a, ịhọrọ ebe ntọala, kacha mma mgbe ị maghị nke ọma banyere njem ị ga-eso.
Ya mere, ihe mbụ bụ ime ndepụta saịtị ndị ịchọrọ ịga, dị ka mkpirisi dị ka o kwere mee. Chee echiche banyere oge ole ị nwere, ma ọ bụrụ na ọ bụ izu ụka, otu izu, ụbọchị iri na ise. Ma ee, ị gaghị ahụ ihe niile na njem mbụ, ị ga-enwe ihe ndị fọdụrụ na pipeline ma n'enweghị obi abụọ, ị ga-ahụkwa ebe ndị magburu onwe ha ga-eme ka ị chọọ ịlaghachi.
Ka anyị hụ mgbe ahụ, na Black Forest bụ obodo nke Freiburg, ọmarịcha mahadum obodo, nwere ọmarịcha akụkọ ihe mere eme na ugwu nwere ọtụtụ ụzọ ụkwụ na-aga na nke Ọdọ Mmiri Titisee Ị rutere n'ụgbọ okporo ígwè na njem na-erughị otu awa; Y Baden - Baden, nnukwu ụlọ ezumike ama ama kemgbe oge Rome. Ke adianade do, obodo a dị nso na Schwarzwald National Park, na Black Forest National Park, ya na ugwu ya, ọdọ mmiri glacial na obodo nta ya.
Obodo ọzọ dị na mpaghara ahụ bụ freudenstadt, ya na square ochie ya, nnukwu ụlọ a na-ewubeghị na ụlọ ụka Gothic-Renaissance mara mma. Ọ bụkwa obodo okpomọkụ. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na-amasị gị mmanya omenala ị nwere ike na-eso nke Ụzọ mmanya Baden, site na ubi-vine site na obodo Heidelberg dị nso, Freiburg na Baden Baden n'onwe ya. Dị ka mgbe niile, buru n'uche na ebe obibi n'obodo ndị a nwere ike ịdị ọnụ, ya mere na gburugburu ebe obibi ị ga-achọta ọnụ ahịa ka mma mgbe niile.
Nwekwara ike ịga Stuttgart, National Museum of the Reloj, ịhụ clocks cuckoo ama ama, na Black Forest Open Museum, ebe ị nwere ike ịhụ usoro ọrụ ugbo ọdịnala na-ahụkarị nke mpaghara site na oge ...
N'ụdị mpaghara ndị a ije na-ewu ewu mgbe niile Nke bụ́ eziokwu bụ na okporo ụzọ juru n’ime ọhịa ojii. Obodo ukwu niile, Baden-Baden, Freiburg ruo Offenburg nwere ụlọ ọrụ nlegharị anya nke ha ebe ị nwere ike nweta maapụ na ozi ndị ọzọ iji mee ogologo ụzọ ma ọ bụ ụzọ dị mkpirikpi. Ọtụtụ n'ime ụzọ ndị a dị mfe ịgbaso na akara na agba dị iche iche: okporo ụzọ obodo na-acha odo odo, okporo ụzọ mpaghara na-acha anụnụ anụnụ na okporo ụzọ ndị na-acha uhie uhie.
N'oge ọkọchị, a na-enwe ọtụtụ mmadụ na-eme njem ma na-enwekarị posts n'akụkụ ụzọ. N'ezie, ọ bụrụ na ị bụ onye na-akwado ọrụ a, ị nwere ike ime ihe ọ bụla na-eje ije ma ghara ịrahụ ụra n'ụlọikwuu. Ọzọkwa e nwere thematic ụzọ na-emeso akụkụ ụfọdụ nke mpaghara ahụ: ndụ ugbo, ebe ndị a ma ama, omenala, mmanya ...
Dee ihe ndị a ụzọ ndị ewu ewu:
Schwarzwaldhocstrasse: Ọ bụ ụzọ kacha ochie, n'ebe dị elu, n'ebe ugwu, ọ na-elekwasịkwa anya n'ezi echiche panoramic.
Schwarzwald Panoramastrasse: ọ bụ ụzọ mara mma, nke nwere ugwu ndị dị elu na echiche dị egwu karị.
Badische Weinstrasse: Ọ bụ ụzọ spa ka ọ na-agafe ọtụtụ obodo okpomọkụ.
Klosterroute Nordsschwarzwald: ọ bụ okporo ụzọ ebe obibi ndị mọnk dị n'ebe ugwu nke oke ọhịa ojii. Enwere ebe obibi ndị mọnk mara mma, gụnyere ebe obibi ndị mọnk Maulbronn nke ụwa.
Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ụzọ kachasị mma, e nwere ndị ọzọ na ndị ọzọ, n'agbanyeghị na ha na-agafe n'oké ọhịa ojii, ọ bụghị naanị ya, dị ka. Ụzọ Ọrụ Ugbo German, na Ụzọ Hohenzollern ma ọ bụ Ụzọ Rome Neckar-Alb-Aare na-ekpuchi mkpọmkpọ ebe ndị Rom, ebe ngosi ihe mgbe ochie, na ihe ndị e gwupụtara n'ala.
N'ikpeazụ, ndụmọdụ ole na ole ndị ọzọ: na Black Forest ị ga-aga na nnukwu ụlọ (Eberstein Castle, Karlsruhe Palace, Hohengeroldseck, Hohenzollern na ụdị neo-Gothic, nke kaisers na ndị eze, dịka ọmụmaatụ); ị ga-enwerịrị gaa na ịnweta spa (enwere saịtị 17 na nke a), na-eje ije, gaa leta ụlọ ngosi ihe mgbe ochie nke ikuku, banye n'ime ogbunigwe akụkọ ihe mere eme nke oge ochie na ileta ọbụna a di na nwunye nke obodo ma ọ bụ obere obodo, dịka ọmụmaatụ Calw, na Nagold Valley, super picturesque, ma ọ bụ Bad Wildbad ma ọ bụ obere Breisach am Rhhein, Gangenbach ...
Want chọrọ akwụkwọ ntuziaka?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Alemania » Ndụmọdụ maka njem na oke ọhịa ojii
Zọpụta aha m, email na ebe nrụọrụ weebụ na ihe nchọgharị a maka oge ọzọ m ga-aza.
Achọrọ m ịnata onyinye na azụmaahịa njem na email m
Ihe ị ga-ahụ na Icod de los Vinos
Ihe ị ga-ahụ na Portocolom
Nweta ozi ọma na email gị
Jikọọ na Actualidad Viajes free ma nata ozi kacha ọhụrụ banyere njem na njem na email gị.
Njem zuru oke
Nlegharị Anya Dubrovnik
4 Hotlọ nkwari akụ
Rgbọ ala m
Anata onyinye na ahia